Goodax iyo ku-xigeenadiisa oo looga yeeray BF iyo kiiska ardayda dhacday oo meel sare gaaray - Idman news
Goodax iyo ku-xigeenadiisa oo looga yeeray BF iyo kiiska ardayda dhacday oo meel sare gaaray
Muqdisho (Caasimada Online) – Guddi xaqiiqo raadin ah oo ka tirsan golaha shacabka ayaa ka dalbaday wasiirka waxbarashada Soomaaliya Cabdullahi Goodax Barre inuu hor yimaado golaha si wax looga weydiiyo imtixaankii shahaadiga ahaa ee sanadkan ay qaaday wasaaraddu.
Qoraal ka soo baxay guddigaas ayaa looga dalbaday wasiir Goodax inuu fadhiga golaha hor yimaado Arbacada soo socota.
“Anigoo fulinaaya amarka guddoomiyaha golaha shacabka, waxaana si xushmad iyo qadarin leh kaaga codsanaynaa inaad noogu timaadiin xarunta Villa Hargeysa ee golaha shacabka, si aan wax kaaga weydiino natiijadii imtixaanka dugsiyada sare ee dalka,” ayaa lagu yiri qoraalkan oo uu ku saxiixanyahay Xildhibaan Khaalid Macow Cabdulqaadir.
Qoraalka ayaa intaas ku daray, “Waxaan idinka rajeynaa inaad timaadaan xarunta Villa Hargeysa ee golaha shacabka maalinta Arbacada ee taariikhdu tahay 21-10-2020-ka.”
Dalabka golaha shacabka ee u yeerista wasiirka waxbarashada ayaa yimid kadib markii ay imtixaanka dowladda sanadkan ku dhaxeen in ka badan 8,000 oo arday, kuwaas oo 90% ah ardayda wax ku baratay gobolka Banaadir.
Previous Oday beeleedyo gaaray Jowhar iyo wararkii ugu dambeeyey doorashada HirShabelle
Next WARKA HABEEN 8:00PM (18-10-2020) – RADIO KULMIYE:: 88.0 MHZ Mogadishu-Somalia